South Asia and Beyond: #IamwithDrKC: तीर्थ खनियाँको राजीनामा माग्दै मंसीर ८ गते त्रिवि घेरौं!
#IamwithDrKC: तीर्थ खनियाँको राजीनामा माग्दै मंसीर ८ गते त्रिवि घेरौं!
आइओएममा वरिष्ठताका आधारमा डिनको नियुक्ति गर्नेलगायतका मागहरु राखेर अनशन बसेका डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य विग्रंदै गर्दा राज्यले अझै समस्या समाधानका लागि कुनै पहल गरेको छैन ।
खास गरी आइओएममा नियुक्तिको समस्या बल्झिनुमा त्रिविका पदाधिकारी जिम्मेवार छन् । पहिले ९ महिनासम्म पद खाली राखेर नियुक्ति गर्ने बेला वरिष्ठता नभई हचुवाका भरमा नियुक्ति गरिएकाले अहिले समस्या बल्झेको हो ।
आफैं बौद्धिक चोरीमा संलग्न भएको प्रमाण बाहिर आइरहँदा पदमा ल्याइएका त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले आइओएममा डा केपी सिंहलाई डिन बनाउँदा नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने चलखेल भइरहेको समेत देखिन्छ । त्यसैले अब आइओएममा शंकास्पद तरिकाले बनाइएका डिन मात्र हैन उपकुलपछि तीर्थ खनियाँलाई समेत बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अहिले अनशनको दशौं दिनमा समेत समस्या समाधानको पहल कतैबाट नभएपछि भोलि मंसीर ८ गते १२ बजे त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालय घेराउ र प्रदर्शन गरिने भएको छ । सो कार्यक्रममा सहभागी हुन सबै सचेत नागरिकहरुलाई डा केसी अलायन्स हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
भोलिको घेराउपछि पनि समस्या समाधान भएन भने अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याइनेछन् ।